ဆင်းရဲမှု တကယ်လျော့ကျသလား - Yangon Media Group
ယခု နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီ၏ (၃/၂ဝ၁၇)အစည်း အဝေးကျင်းပကြောင်း သတင်းစာတွင်ဖတ်ရသည်။ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၏ မိန့်ခွန်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြောကြားချက် စသည်များကိုဖတ်ရှုပြီး စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုများကို တွေးမိသောအခါ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပြောကြားသည့် မြန်မာနေထိုင်မှုဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇) ထုတ်ပြန်တော့မည့်အကြောင်းကို ပြေး၍သတိရသည်။
ဆက်စပ်၍ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်းကို ကျနကြီးကျယ်စွာ ကောက်ယူခဲ့သည့်အကြောင်းကိုလည်း စဉ်းစားမိပြန်သည်။ ထိုစဉ်က သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် အိမ်ထောင်စုတစ်စု၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ပတ်သက် သော အချက်အလက်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကို စစ်ဆေး မေးမြန်းကောက်ခံ မှတ်တမ်းပြုစုခဲ့ကြောင်း မှတ်မိပါသည်။ ထိုသို့ပြုစုခဲ့သော အချက်အလက်များအနက် ယခုကောက်ခံခဲ့သည့် မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်းတွင် လိုအပ်သောအချက်များ (Criteria) ၊ ညွှန်းကိန်းများ (Indicators)၊ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များ (Parameters)၊ အခြေခံကန့်သတ်ချက်များ (Thresholds)နှင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်များ (Determinants)ပါဝင်သည်ဟု ယူဆမိသည်။
ဤမြန်မာနေထိုင်မှု (Myanmar Living Conditions)ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (Survey)သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ကောင်းစွာဖော်ပြမည်ဟု သိရသည်။ ထိုအခါ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလ ၂ဝ-၂၂ ရက်တွင် နေပြည်တော် ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသားအဆင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲကို ပြေး၍အမှတ်ရသည်။ ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာဦးမြင့်တင်သွင်းဖတ်ကြားသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး လမ်းပြစာတမ်း (Reducing Poverty in Myanmar :The Way Forward ) ကိုပြေး၍ သတိရမိသည်။ ဆရာဦးမြင့်က ရှည်လျားပြည့်စုံသော ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးလမ်းပြသည့် အကြောင်းအချက်များစွာကို နိုင်ငံတကာအမြင်နှင့် မြန်မာ့အခြေအနေကို ထင်ဟပ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အလွန်မှတ်သားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်သင့်သည်။
မည်မျှလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်တော့ မသိပါ။ ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောလကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့၏ ပူးတွဲကောက်ခံခဲ့သည့် စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရာခိုင်နှုန်းသည် ယခင့်ယခင်က ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရာမှ ၃၆၊ ၂၆ မှသည် ယခုအခါ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဤသို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပျမ်းမျှ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတော့သည်ဟူသော သတင်းထွက်လာ သောအခါ မီဒီယာလောကမှ ပြည်သူများထံ သတင်း ပေးသူများသတင်းပေးရန် တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ပြည်သူအများကို ပေးရမည့်သတင်းမှန်၊ မမှန်တကယ်ပင် မြန်မာတို့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ကျသွား၊ မသွား မေးကြမြန်းကြလေသည်။
ဤအမေးကို ယေဘုယျခြုံငုံဖြေကြားရမည်ဆို သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းကျဆင်းသွားသည်ဟု မဆိုနိုင်သေးကြောင်းအတိုချုပ် ပြောလိုသည်။ ဤတွင် ရှင်းပြရန်လိုလာ၏။ မရှင်းပြမီ ဦးစွာပြောရမည့်အချက်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုသည်ကို မည်သို့တိုင်းသနည်း။ မည်သည့်နည်းနှင့်တွက်ချက်သနည်း။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုသည်ကို မည်သို့ဖွင့်ဆိုသနည်း။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဟူသော ဝေါဟာရ ဖွင့်ဆိုပုံတို့က မတူကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ပေတံနှင့်တိုင်းမည်လား။ အမေရိကားနိုင်ငံက တိုင်းသလိုတိုင်းမှာလား။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံကို ထိုအဆင်းရဲ ဆုံး နိုင်ငံများနှင့် ချိန်ထိုး၍တိုင်းပြီး ဆင်းရဲရခြင်းဆိုသည်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမည်လား။ ဦးစွာပထမ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုသည်ကို ကုလ သမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်ဆိုသလို ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းအဖြစ် အကျုံးဝင်သည့် အနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ချက် (Poverty Thresholds) နှစ်မျိုး ပြဆိုသည်။
(၁) လုံးဝအကြွင်းမဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း (Absolute Poverty)
လူသား၏အခြေခံလိုအပ်ချက် စား၊ ဝတ်၊ နေ ရေးမလုံလောက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော သောက်သုံးရေမရခြင်း၊ (ထိုရေရရှိရန် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ် ကြာအောင် သွားရောက်ခပ်ယူရခြင်း)၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်ရန် အိမ်သာမရှိခြင်း၊ (တောထိုင်ခြင်းဓလေ့မျိုးသာရှိ၍ ယင်လုံအိမ်သာဆို ဝေလာဝေးခြင်း)၊ ကျန်း မာရေး (အာဟာရမပြည့်ဝခြင်း၊ သတ်မှတ်ကူးစက် ရောဂါဖြစ်ပွားခံရ လွယ်ကူခြင်း)၊ ပညာရေး (အသုံးလုံးပင်မကျေသော လုံးဝပညာမတတ်သူ မိသားစုဝင်ရှိခြင်း)၊ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေး (ဘာပြန်ကြားရေး ကိရိယာမှမရှိဘဲ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အဆက် ပြတ်နေခြင်း)၊ ဝင်ငွေအနေဖြင့် တစ်နေ့အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာပင်မဝင် (နောက်ပိုင်း ၁ ဒသမ ၉၅ ဒေါ်လာပင်မဝင်ခြင်း) ၊ ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက် (ဆံပင်ညှပ်ခ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ ဆပ်ပြာလိုအပ်ချက် သွားလာစရိတ်မရှိခြင်း)
(၂) အားလုံးခြုံငုံဆင်းရဲခြင်း (Overall Poverty)
တာရှည်ခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ မိသားစုထဲတွင် အလုပ်လက်မဲ့ အရွယ် ရောက်သူရှိခြင်း၊ စားရမဲ့မဲ့ သောက်ရမဲ့မဲ့နှင့် အာဟာရချို့တဲ့စွာ စားရခြင်း၊ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း၊ ပညာရေး၌ အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ ပညာမသင်ရသူ မိသားစု၌ရှိခြင်း၊ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များရှိခြင်း၊ မပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးနှင့် သေဆုံးမှုနှုန်းများခြင်း၊ အိမ်မဲ့ရာမဲ့ရှိခြင်း၊ လူစဉ်မီမီမနေနိုင်ခြင်း၊ မြေစိုက်တဲ၊ အမိုးအကာမလုံသောတဲငယ်တွင် မိသားစုဝင်လေး ယောက်ထက်ပို၍ နေထိုင်ရခြင်း၊ မလုံခြုံသော နေရာတွင်နေကြရခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဘဝတွင် နေရခြင်း၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှ ဝိုင်းပယ်ခံ ရခြင်း၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုရပ်ဝန်း၊ လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးသော ဘဝနေထိုင်မှုအတွက် မိမိသ ဘောဆုံးဖြတ်ချက်၊ မိမိအလိုဆန္ဒအရ နေထိုင်ရပိုင်ခွင့်မရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးဆုတ်ဆိုင်းမှု၏ ရလဒ်ကြောင့် အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေမရနိုင်ခြင်းတည်းဟူသော ဖွံ့ဖြိုး မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွင် ကြုံရသည့်အဖြစ်မျိုးရှိခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများနှင့် ခံစားနေရခြင်း၊ လုပ်ခဝင်ငွေအလွန် နိမ့်ကျခြင်း၊ မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှု ဘဝမှ ကင်းကွာနေခြင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသက်ကယ်အစီအစဉ်များနှင့် ကင်းဝေးလက်လွှတ် ခံနေရခြင်း။
အထက်တွင်ဖွင့်ဆိုထားသော (၁) လုံးဝအကြွင်းမဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းနှင့် (၂) အားလုံးခြုံငုံဆင်းရဲခြင်း အချက်ကြီးနှစ်ချက်ဖြင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို သတ်မှတ်ချက်ဘောင် (Parameter) တစ် ခုချင်းနှင့် တိုင်းတာတွက်ချက်ကြည့်လျှင် မည်သည့်အဖြေ၊ မည်သို့သောရလဒ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စေ့ငုသေချာစွာချိန်ထိုးရန် လိုပါသည်။ ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များသည် တစ် ခုချင်းစီ ဆွဲဆန့်ကြည့်လျှင် အတော်ပင်ရှုထောင့်မျိုး စုံထွက်လာနိုင်ရန် ရှုပ်ထွေးနက်နဲလှပေသည်။ သို့ဆိုလျှင် ပို၍ရိုးရှင်းစွာ ညွှန်းကိန်းပြ (Indication) ပြထားသည့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂ၏ တိုင်းတာချက်ကို ဖော်ပြပါမည်။ လူသား၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ချို့တဲ့မှု (Deprivation) အနက် ပြင်းထန်သော ချို့တဲ့မှုကို အောက်ပါအချက်များနှင့် တိုင်းတာသည်-
(၂) စိတ်ချရသော သောက်သုံးရေ
(၃) အိမ်သာနှင့် အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ရန် လိုအပ်ချက်
(၈) ရနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအရေး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှုန်းကို အထက်ပါ ရှစ်ချက်နှင့်ချိန်ထိုးပါက နှစ်ချက်မကောင်းလျှင် ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုမျဉ်းအောက် ရောက်သည်ဟု တွက်ကြည့်ပါအံ့။ ဆင်းရဲမှုနှုန်းမည်သည့် ရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်ပါသနည်း။ ဤနှစ်ချက်နှင့် ငြိနေသည့် ဆင်းရဲသူ အရေအတွက် မည်မျှရှိမည်နည်း။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် လူမျိုးရေးနှင့် လူ့အဆင့်အတန်း ဇာတ်ခွဲခြားမှုတွင် အတော်အယူသည်းသည့်အတွက် ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှုန်းကို Socio-Economic Caste Census (SECC) နည်းနှင့် အကြိမ်ကြိမ်တွက်ဆခဲ့သည်။ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၇၊ ၂ဝဝ၂ နှင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် များတွင် Census သန်းခေါင်စာရင်းကောက်၍ ယခု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နောက်ဆုံးကောက်ယူချက်အရ ကျေးလက် ဒေသနေ ပြည်သူတို့၏ ဆင်းရဲမှုမျဉ်းအောက်ရှိ Below Poverty Line (BPL) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၃၉ ဒသမ ၉ ရှိသည်။ မြို့ပြနေပြည်သူများ၏ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၆ ဒသမ ၄ ရှိသည်။ အိန္ဒိယတစ်ပြည်လုံး ပျမ်းမျှဆင်းရဲမှု မျဉ်းအောက်ရှိသူ ၂၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဟုဆိုသည်။ အိန္ဒိယသည် သတ်မှတ်ချက်ဘောင် Parameter (၇)ချက်၊ (၁၃)ချက်စသည်ဖြင့် သေချာတွက်ချက် တိုင်းတာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအနက် ဝင်ငွေကို တစ်နေ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၉ဝ ဖြစ်သည်ဟု အခြေခံနှင့် BPL ကို တွက်ခဲ့ရာ၊ ယခုဆို နှစ်ဆ ခန့် ပိုတွက်ရမည်ဆိုသည်။
ဤအချက်အလက်တစ်ခုနှင့်ပင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဆင်းရဲမှုနှုန်းတိုင်းရာ၌ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က ဝင်ငွေနှင့် တိုင်းလျှင် မည်သို့မျှမမှန်နိုင်တော့။ ထိုစဉ်က ဆန်တစ်ပြည်က ယခုထက်တစ်ဝက်သာဈေးနှုန်းရှိခဲ့သည်။ ယခုငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ကြီးမားလျက်ရှိရာ ငွေလဲနှုန်း အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာငွေကျပ် ၁၃၆ဝ ဝန်းကျင်ကမကျတော့။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က ကျပ် ၈၂ဝ နှင့် နှိုင်းသော် ၆၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဈေး တက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်နိုင်စွမ်းကွာခြားမှု နှုန်း Purchasing Power Parity (PPP) နှင့်တွက်မှ ဆင်းရဲမှုနှုန်းကို အမှန်သိနိုင်ပေမည်။ ဤသို့ဝယ်ယူ နိုင်စွမ်းကွာခြားမှုနှုန်းကို ကုန်ပစ္စည်းခြင်းတောင်း တစ်တောင်းထဲထည့်၍ ထိုပစ္စည်းစုပေါင်းတန်ဖိုးနှင့်တွက်သည်။ ဥပမာ- ခြင်းတောင်းတစ်ခုတွင် ဆန်တစ်ပြည်၊ ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ၊ စားသုံးဆီတစ်ပုလင်း၊ ကြက်သားတစ်ပိဿာတို့ကိုထည့်၍ ထိုပစ္စည်းလေး မျိုး၏တန်ဖိုးနှင့် အခြားနိုင်ငံရှိတန်ဖိုးကို နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ခြင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝယ်နိုင်စွမ်းကို သိ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသို့တွက်ပါက ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည် အစားအသောက် (ဆန်တစ်ပြည်)အတွက် ဝယ်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်က အိမ်ထောင်စုတစ်စု၏ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေအပေါ် မည်မျှရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း အဖြေရလဒ်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်တွက်ပါက ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပေမည်။ ဤအထဲက တစ်နေ့အလုပ်ဆင်း အလုပ်တက်သွားစရိတ် (ဝန်ဆောင်မှု) ကုန်ကျသော ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေသည်။ ဤနှစ် မျိုးနှင့် လက်လုပ်လက်စားရရှိသော အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ဝင်ငွေကျပ် ၃၆ဝဝ မှာ ၁၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကုန်သွားသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာတို့ဝင်ငွေနှင့် သုံးငွေမလုံ လောက်သေးသည့် လူဦးရေအလွန်များနေသည်နှင့် အညီဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရာခိုင်နှုန်းလည်း (နှစ်ချက်ငြိရုံနှင့်) ကျဆင်းလာသည်ဟု တွက်ချက်၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်သေးကြောင်း အကြမ်းဖျင်းနှင့်ပင် သိသာပေသည်။ ။
ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ထီဆု လက်မှတ်နှစ်စောင်နှင့် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ ဆုမဲ အပါအဝင် ဆုလက်မှတ်ပေါင်း ၃၇ဝဝ ကေ??
‘မုန်းစွဲ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အောင်ပွဲအနေဖြင့် ‘အရှင်ဆန္ဒာဓိက’ တရားပွဲ ရွှေထွဋ်တင်ဝင်းတွင် က??